Izy ireo dia manana ra mafana ary manana atody. Feno volom-borona ny tenany ary manana elatra. Ny volom-borona dia manana asa telo, fisidinana, ny famehezana ny mari-pana ary ny fampisehoana. Manana taolana poak'aty ny vorona hahakely ny lanjany.
Ny vorona dia hita ao amin'ny kaontinanta rehetra eto amin'izao tontolo izao. Ny karazam-borona ny samihafa dia afaka miaina amin'ny tontolo mangatsiaka, ary ny hafa dia afaka miaina ao amin'ny toe-tany mahamay. Ny vorona dia hita anaty ala, amin'ny kijana, amin'ny harambato tarehy, amin'ny sisin-drenirano, ny vato amoron'ny ranomasina, amin'ny zana-tsipìkany sy ny tampon-trano.